Fampandrenesana misongadina-Faucets ao an-dakozia, mpihaza vilany, Faucets fandroana
Home / Fifanarahana misongadina
WOWOW FANS FANS WELFARE !!! Fiaraha-miasa 1. Fanomezana maimaimpoana farango akanjo roa omena maimaimpoana !! Ny olona tsirairay dia afaka mahazo entana iray maimaim-poana. Fomba fangatahana amin'ny fanomezana: Dingana 1: Tsidiho ny www.wowowfaucet.com. Dingana 2: Misoratra anarana ary miditra. Dingana 3: Mandefasa hafatra na mailaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa WOWOW FAUCET. Ampahafantaro anay ny anaran'ny kaonty voasoratra anarana sy ny adiresinao fandefasana. Fiaraha-miasa 2. Te hanana entana bebe kokoa? Ampirisiho ny namana handray anjara amin'ity hetsika ity. Samy afaka mahazo fanomezana iray ianao sy ny namanao. Afaka manolotra namana 4 ianao raha be indrindra. Ahoana ny fandraisana anjara: Rehefa mandray anjara amin'ilay hetsika ny namanao dia azafady mba jereo izy ireo handefa ireo fampahalalana ireo amin'ny mailaka anay. 1. Iza no manoro hevitra anao handray anjara amin'ity hetsika ity? Azafady mba omeo ny anarany kaonty voasoratra anarana. 2. Ny anaran'ny kaontinao voasoratra anarana. 3. Adiresy fandefasana. Fanamarihana: Ny IP tsirairay, ny mpampiasa tsirairay ary ny adiresy fandefasana dia tsy afaka mandray anjara amin'ilay hetsika etsy ambony indray mandeha. Raha manasa ny namanao handray anjara amin'ilay hetsika ianao dia afaka mahazo fanomezana bebe kokoa. Fa ny habetsahan'ny fanomezana be indrindra ho an'ny olona iray dia efatra.
WOWOW bokotra Towel volamena mifangaro